You are at:Home»ကျွန်ုပ်တို့ အကြောင်း
“ညီမျှခြင်း–မြန်မာ” (ယခင်–လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးဌာန-(မြန်မာနိုင်ငံ) HREIB)” သည် အမြတ်အစွန်းအတွက် မရည်ရွယ်သည့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြေခံပြည်သူ လူထုများအတွက်ဦးတည်၍ လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးခြင်း အစီအစဉ်များ၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းအစီအစဉ်များနှင့် သုတေသနအစီအစဉ်များကို လုပ်ဆောင် နေလျက်ရှိသည်။
ညီမျှခြင်း–မြန်မာ သည် လူ့အခွင့်အရေးနည်းပြသင်တန်းများ၊ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနှင့် သီးခြားခေါင်းစဉ်အလိုက် လူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းများ၊ အများပြည်သူပါဝင်နိုင်သည့် အခမ်းအနားပွဲများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်မည့်ု့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့ရှိ သင်တန်းခန်းမများတွင် သာမက မြန်မာပြည်အနှံ့တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန်ပြန့် လုပ်ဆောင်နေလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကဏ္ဍအသီးသီးကို လုပ်ဆောင် နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများက ဖိတ်ကြားသောသင်တန်းများသို့လည်း နည်းပြများစေလွှတ်၍ လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးလျက် ရှိပါသည်။
“ညီမျှခြင်း – မြန်မာ” ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှစ၍ အမျိုးသမီးများ၊ လူငယ်များ၊ သံဃာတော်များ နှင့်သင်းအုပ်ဆရာများ၊ လိင်တူချစ်သူများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ရပ်ရွာလူထု ခေါင်းဆောင်များ အပါအ၀င်လူဦးရေ စုစုပေါင်း လူဦးရေ (၂၀၀၀)ကျော်အား လေ့ကျင့်ပညာပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားနှင့် နယ်စပ်ဒေသတလျှောက်တို့တွင် အားကောင်းသောလူ့အခွင့်အရေးနည်းပြများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်သူများ ကွန်ယက် များကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
“ညီမျှခြင်း–မြန်မာ” သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်းမှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်တွင်း၊ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအကြား သိရှိလာစေရန် လုပ်ဆောင်သည့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်း ကမ်ပိန်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဦးဆောင်ပါဝင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ နည်းပါးနေခြင်းကို ဖြည့်ဆည်းသည့်အနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး ပညာပေးဆိုင်ရာ အထောက်ကူပစ္စည်းများ၊ အသံနှင့်ရုပ်မြင် ထုတ်လုပ်မှုများနှင့် အခြား မာတီမီဒီယာပိုင်းဆိုင်ရာ တင်ဆက်မှုများကို မြန်မာဘာသာနှင့် တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများဖြင့် ထုတ်လုပ်နေပါသည်။ ထိုထုတ်လုပ်မှုများမှာ ရုပ်မြင်သံကြား ပညာပေး အစီအစဉ်တွဲများ၊ ပညာပေးပို့စတာများ၊ တေးသီချင်းများ၊ တေးဂီတ ရုပ်သံသီချင်းများ၊ မဂ္ဂဇင်းများဖြစ်သည်။ ထိုအရာများကို လူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းများသို့ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသူများ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးသည့်အနေဖြင့် ထုတ်ဝေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
“ညီမျှခြင်း–မြန်မာ” သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားမှုအပေါ် အခြေခံသည့် ငြိမ်းချမ်းသော၊ သည်းခံစိတ်ရှည်သော၊ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားသော လူမှုအသိုက်အ၀န်း ပေါ်ထွန်းလာစေရန် မျှော်မှန်းချက်ထား ပါသည်။
“ညီမျှခြင်း–မြန်မာ” သည် မြန်မာပြည်သူများအား လူမှုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားအောင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပါဝင်လာစေရန်အတွက် လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးခြင်းမှတဆင့် စွမ်းရည်မြှင့်တင်သွားရန် ရည်မှန်းထား ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေးလေးစားလိုက်နာမှုများ တိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်။
လူ့အခွင့်အရေးပိုင်ဆိုင်သူများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအတွက် တာဝန်ရှိသူများအကြား လူတိုင်းပါဝင်သော ပညာရေး ပုံစံဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးအမြင်များ ဖွင့်ပေးရန်။
ရပ်ရွာလူထုနှင့် ကွန်ယက်များက အစပျိုးလုပ်ဆောင်လာသည့် လူ့အခွင့်အရေးအခြေပြုသောလှုပ်ရှားမှုများကို စွမ်းရည်မြှင့် တင်ပေးခြင်းအားဖြင့် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားရန်။
မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်း၊ ရပ်ရွာအသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်းနှင့် နယ်ပယ်အတွင်း တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည့်သူများကို စွမ်းရည်မြင့်တင်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ဦးတည်အုပ်စုများအား မဟာဗျူဟာကျကျ ရွေးချယ် ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ လူ့အခွင့်အရေး ပညာပေးသင်တန်းများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများ၊ ရပ်ရွာလူထုခေါင်းဆောင်များနှင့် အမျိုးသမီးအုပ်စုများ၊ ကျောင်းသား သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များ၊ လိင်တူချစ်သူအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ နိုင်ငံရေးတက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများ၊ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ဘာသာရေး လူနည်းစုဝင်များ၊ ကျောင်းဆရာ၊ဆရာမများ၊ လယ်သမားနှင့် အလုပ်သမား သမဂ္ဂ၀င် များအားရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ်ပါသည်။
အကျိုးခံစားသူများနှင့် လက်တွဲဖော် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို ရွေးချယ်ရာတွင် လူ့အခွင့်အရေးအခြေပြု ချဉ်းကပ်ခြင်း ရှုထောင့်သည် လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်းရှိ ကဏ္ဍတိုင်းနှင့် နေရာတိုင်းတွင် အရေးပါသောအရာဖြစ်ပြီး ထိုရူထောင့်သည် တန်းတူညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှုတို့ တိုးတက်မြင့်မားစေရေးအတွက် လိုအပ်သောအဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု လက်ခံယုံကြည် သောအချက်အပေါ် အခြေခံထားရွေးချယ်ပါသည်။
“ညီမျှခြင်း–မြန်မာ” သင်ယူသူကို ဗဟိုပြုသင်ကြားပြီး သမရိုးကျသင်ကြားမှုပုံစံမဟုတ်သောချဉ်းကပ်မှုများအား အသုံးပြုကာ သင်ယူသူ၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့် ဗဟုသုတများကို ပိုမိုအားကောင်းစေသည့် နည်းလမ်းများကို စတင်မိတ်ဆက် အသုံးပြုခဲ့သည်။ မိမိတို့အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများသည် အသိအမြင်၊ သဘောထားနှင့်အပြုအမူ ဆိုင်ရာအဆင့် သုံးဆင့်စလုံးတွင်ပြောင်းလဲလာအောင် အလေးထားသင်ကြားသောနည်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ အချုပ်အားဖြင့် ၎င်းအဆင့်သုံးဆင့် ပြောင်းလဲခြင်းစေကြောင့် မြန်မာပြည်သူများအနေနှင့် လက်ရှိ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော လူမှုပြဿနာများကို ဖော်ထုတ် သုံးသပ်တတ်စေပြီး ထိုမှတဆင့် လူ့အခွင့်အရေးအခြေပြုသော ဖြေရှင်းမှုများဖြင့် တုန့်ပြန်ဖြေရှင်းတတ်လာစေအောင် စွမ်းရည်မြှင့်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆန်းသစ်တီထွငပြီး နှင့် ပူပေါင်းပါဝင်မှုဖြစ်စေသော သင်ရိုးညွန်းတမ်းပုံစံများသည် ပါဝင်သူများကို သူတို့၏ ဗဟုသုတ အတွေ့အကြုံများကို ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ပြီး အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးနိုင်စေမည့် အခွင့်အလမ်းရရှိစေပါသည်။ ဤသင်ကြားမှု လမ်းစဉ်သည် ပါဝင်သူများအပေါ်အခြေပြု၍ လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းများအပေါ် အဓိကပြုပါသည်။ လေ့လာသူတဦးချင်းစီကို သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များနှင့် ဘ၀အတွေ့အကြုံများဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ် လက်ခံထားပါသည်။
“ညီမျှခြင်း–မြန်မာ” သည် လူ့အခွင့်အရေးဆိုသည်မှာ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီး ဆင့်ကဲပြောင်းလဲတတ်ကြောင်းကို အသိအမှတ်ပြုလက်ခံသည်။ သင်တန်းသူသင်တန်းသားများအား လူ့အခွင့်အရေးချိုး ဖောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်မည့် လက်တွေ့ကျသော နည်းလမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ထိုနည်းလမ်းများကနေ၍ သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုများ၊ လူမှုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် လူထုနှင့်ထိစပ်နိုင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု များကို အားကောင်းလာစေမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးအစီအစဉ်သည် သင့်လျော်၍ လက်တွေ့ကျသော လူ့အခွင့်အရေး အခြေခံမူများ အပေါ် ဗဟိုပြီး သင်ယူသူများအား ၎င်းတို့၏ ရပ်ရွာအသိုင်းအ၀ိုင်းနယ်ပယ်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိ သူများဖြစ်စေရန် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ သင်တန်းသူသင်တန်းသားမျာကနေ၍ မြန်မာပြည်အတွင်းရှိ လူ့အခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှား သူများအကြားကွန်ယက်ကျယ်ပြန့်လာစေရန် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လုပ်ဆောင် လျက်ရှိသည်။ လူ့အခွင့်အရေးသင်တန်း တခုပြီးတိုင်း မြန်မာပြည်သူလုထုအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးကိုသိရှိပြီး လေးစား လာသူဦးရေ တိုးပွားလာလျက်ရှိပါသည်။
Equality Myanmar sharedalink. ... See MoreSee Less
သင့်ကလေးကို မဖြစ်မနေ ပြောပြထားရမယ့် အချက်(၇)ချက် - DVB
မြန်မာနိုင်ငံလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးများအကြမ်းဖက်ခံရမှု မြှင့်တက်နေဆဲ အပေါ် ညီမျှခြင်းမြန်မာစိုးရိမ်
မြန်မာတပ်မတော်နှင့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များတွင် ကလေးသူငယ်များအား လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ အတွင်း နည်းမျိုးစုံဖြင့် အကြမ်းဖက်မှု၊ အသုံးပြုမှုများ မြှင့်တက်နေဆဲဟု ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီသို့ မြန်မာနိုင်ငံလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနှင့် ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်မှ တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာကို ဇန်န၀ါရီလ၊ ၁၅ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။
ထိုအစီရင်ခံစာတွင် ကလေးစစ်သားအသုံးပြုမှုရပ်တန့်ရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရ၏ လုပ်ဆောင်ချက် များတိုးတက်လာသည်ဟု အသိအမှတ်ပြုထားသော်လည်း လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးများ အပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများ ဆက်လက်ရှိနေသေးကြောင်း ထောက်ပြထားသည်။
ညီမျှခြင်းမြန်မာ၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဦးအောင်မျိုးမင်းက“စစ်ပွဲတွေကြောင့် ကလေးတွေ ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေ များပြားလာတာတွေ့နေရပါတယ်။ အရပ်သားတွေ နေထိုင်တဲ့နေရာမှာ လက်နက်ကြီးတွေ ဗုံးဆံတွေကျလို့ လသားငယ်လေးတွေ အပါအ၀င် ကလေးတွေ သေဆုံးမှုက မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေ အထူးသဖြင့် ကလေးငယ်တွေကို မထိခိုက်အောင် ကာကွယ်ပေးဖို့ စစ်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံး တာဝန်ရှိသလို လေးစားလိုက်နာ သင့်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ စစ်ပွဲတွေ အမြန်ဆုံးရပ်စဲဖို့ ဖြစ်ပါတယ်” ။
အစီရင်ခံစာရေးသား တင်သွင်းရမည့် ကာလအချိန်(၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၁ ရက် - ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊ ၃၀ ရက်) အတွင်း ကလေးငယ်(၂၁)ဦးဟာ အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက် ခြင်းခံခဲ့ရပြီး၊ (၄၀)ဦးမှာ ဖမ်းဆီးခံရခြင်းနှင့် ပြန်ပြေးဆွဲခံခဲ့ရသည်။ကလေးပေါင်း(၄၁)ဦးဟာ အသတ်ခံ ရပြီး၊ (၁၀၄)ဦးသည် သေရာပါဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ရရှိခဲ့ရသည်။အများစုဟာ မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့်ပေါက်ကွဲစေ နိုင်သည့် လက်နက်များ၏ သားကောင်ဖြစ်နေကြရသည်ဟု အစီရင်ခံစာထဲတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
မြန်မာတပ်မတော်နှင့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအကြား ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လက်နက်ထိပြီး ကလေး သေဆုံးသူပေါင်း (၅၃)ဦးရှိခဲ့သည်ဟု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်နေ့ မနက်၊ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မုံးကိုးမြို့နယ်၊ ပူဝမ်ကျေးရွာ အတွင်းသို့ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့် နေအိမ်ဝန်းအတွင်း ဆော့ကစားနေသော ၂နှစ်အရွယ် မမန်ရှန်ဇုန်းမျှော် သေဆုံးခဲ့ရပြီး၊ ၆နှစ်အရွယ် မောင်လဂွီဘောမ်လာန်းနှင့် ၅နှစ်အရွယ် မောင်လဂွီတိန့်ကျန်းတို့ ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရရှိခဲ့သည်ဟု မြန်မာတိုင်း(မ်) သတင်းစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုအစီရင်ခံစာတွင် စာသင်ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံများကို ပစ်ခတ်ခြင်းများလည်းရှိသည့်အပြင်၊ စာသင် ကျောင်းနှင့်ဆေးရုံများကို လစဉ် စစ်ရိက္ခာသိုလှောင်ခြင်း၊ ညအိပ်ခြင်း၊ စစ်တပ် အပြောင်းအလဲ ပြုခြင်းများအတွက် အသုံးပြုခဲ့မှု (၂၃)ကြိမ်ရှိသည်ဟု ဆိုထားပါသည်။
အစီရင်ခံစာတွင် ကလေးစစ်သားများကို ပြန်လည်လွတ်ပေးဖို့ လုပ်ဆောင်ရာတွင် အချိန်ကြန့်ကြာမှုများ မရှိလုပ်ဆောင်းပေးရန်၊ ခြွင်းချက်မရှိ ချက်ချင်း လွတ်ပေးရန်၊ မြန်မာတပ်မတော်နှင့် အစိုးရထံသို့ အကြံပြုထားသည်။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကိုလည်း ကလေးစစ်သားအသုံးပြုမှု ရပ်တန့်ရန်နှင့် ကာကွယ်ရန် အတွက်(Myanmar Countary Task Force) နှင့်အတူ ပူးပေါင်းစောင့်ကြပ်ခြင်း၊ အစီရင်ခံခြင်း လုပ်ဆောင်ရန် အကြံပြုထားသည်။
မြန်မာတပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့က ပြောထားသည့် အကြံပြုချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ဦးအောင်မျိုးမင်က ထပ်မံပြီး အခုလို “လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများကြောင့် အကြမ်းဖက်ခံရသည့် ကလေးများ တရားမျှတမှုရရှိရေးအတွက် ဥပဒေဖြင့် ကာကွယ်ပေးပြီး၊ မဖြစ်အောင်တားဆီးဖို့လိုသလို ဖြစ်လာရင်လဲ နစ်နာမှုအတွက် ကုစားမှု တွေ လုပ်စေချင်ပါတယ်” ဟု ဦးအောင်မျိုးမင်းက ဆိုပါသည်။
ဤအစီရင်ခံစာတွင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခကြောင့် ကလေးများအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိသေးဟု ဆိုထားပါသည်။
အစီရင်ခံစာ အပြည့်အစုံ။ ။ Fourth report on the impact of armed conflict on children in Myanmar ... See MoreSee Less
ICCPR Action Group's Statement of clashes in Mrauk U, Rakhine State ... See MoreSee Less
ICCPR Action Group's Statement of Clashes in Mrauk U, Rakhine State _ English Version
Equality Myanmar shared Kumudra's post. ... See MoreSee Less
2018 ခုနှစ် ပထမအကြိမ် Board of Directors အစည်းအဝေးအား ညီမျှခြင်းမြန်မာ(Equality Myanmar)ရုံးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ... See MoreSee Less
Archives Select Month January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011